Kugwetshwe iphoyisa laseKZN ngamacala okubulala | News24
Kugwetshwe iphoyisa laseKZN ngamacala okubulala
Durban - INkantolo eNkulu ehlezi eRamsgate ogwini oluseningizimu yeKwaZulu-Natal igwebe iphoyisa iminyaka eyishumi libhadla ejele ngecala elilodwa lokubulala neminyaka engu-15 ngaphezulu ngelinye futhi icala lokubulala.
Izigwebo lizozidonsa kanye kanye.
Okhulumela i-Ipid uMoses Dlamini uthi uWarrant Officer Patrick Gosling, 44, obesebenzela ePort Shepstone, wadubula wabulala uMlondi Ngcobo, 26, noMichael Zakhele Ndovela, 29, ngo-2014.
Kuwona womabili amacala, uGosling wathi abesilisa bamhlasela ngesikhathi ematasa ngomsebenzi wakhe wokunqanda ubugebengu emarenki amatekisi.
OLUNYE UDABA: Ugwetshiwe owabulala umqashi ngesihluku
UDlamini uthi ngesikhathi kuthethwa icala kwavela ukuthi uGosling phambilini wake wadubula wabulala abanye abasolwa ngendlela efanayo.
UDlamini uthi uphenyo lusuka ezigamekweni ezimbili ezenzeka ngo-Agasti 2014 nangoDisemba 2014 lapho umsolwa adalula khona ukuthi wahlaselwa ngabasolwa ayefuna ukubabopha, kodwa kwatholakala ukuthi wayeqamba amanga ngokuhamba kwesikhathi.
UDlamini uthi lena kwakuyindlela yakhe umsolwa yokwenza izinto njengoba kuvele ukuthi bekungaqali ukuba abulale bese evika ngokuthi wayehlaselwa.